Global Voices teny Malagasy » Taratasy Misokatra: Ho An’ireo Mpampiasa Aterineto Any Sina, Avy amin’ny Mpampiasa Aterineto Any Pakistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Desambra 2012 3:05 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika Candy
Sokajy: Pakistana, Shina, Fanarahamaso, Fitsipika, Mediam-bahoaka, Solovava
Ho an'ireo mpampiasa aterineto any Shina,
Manoratra izao taratasy izao aminareo aho amin'ny anaran'ireo Pakistane maro mpampiasa aterineto izay manohitra ny ezaky ny fitondràna hametra ny fahazoany vaovao amin'izao fotoana izao. Ireo 20 tapitrisa mpampiasa aterineto any Pakistana dia ho voafehy, voasivana ary mety ho tapenam-bava amin'ny fomba fijeriny mihitsy aza, ary manahy izahay fa ny governemanta Shinoa sy ireo orinasa Shinoa mpitsikilo dia manampy izany fandikàna ny zon'olombelona izany. Mampalahelo fa voalaza ho tafiditra amin'ny fanampiana ireo fitondràna manao didy jadona ireo orinasa Shinoa. Ny orinasa Shinoa tahaka ny ZTE Corp sy Huawei dia voaheloka ho nanampy ny sivana tany Libia sy Iràna. Na dia sarotra aza ny hitady ny firobohan'i Shina amin'izany, tsy hisalasalàna fa ny sivana Shinoa no idealy indrindra ho an'ireo firenena an-dalam-pandrosoana sy ireo fitondràna mpanao jadona.
Miantso anareo izahay ho an'ny firaisan-kina. Manatena izahay fa hiara-hijoro aminay ianareo ary hanamafy ny antsonay amin'ireo orinasam-panarahamaso Shinoa sy ny fitondràna Shinoa mba tsy hanampy ny Governemantan'i Pakistana amin'ny fanakelezana ny toeranay sy amin'ny mety ho fanampenam-bava atao aminay.
Nandritra ny taona vitsy farany teo, nampiasa ny fivavahana sy ny moraly ny governemanta mba hamerana sy hanaraha-maso ny vaovao. Tranga mampidi-doza izany ho an'ny firenena niaina tanatin'ny sivana napetrak'ireo miaramila mpanao jadona sy governemanta sivily. Jereo ny fomba nakan'ny vahoakan'i Balochistan, iray amin'ireo faritaninay lehibe indrindra, ny tontolon'ny blaogy mba hitaterana ireo fakàna an-keriny tsy ara-dalàna ary ireo famonoan'olona tsy nandalo fitsaràna ataon'ireo masoivohom-panjakàna. Novalian'ireo manampahefàna kosa izany tamin'ny alalan'ny fanakànana ny fidirana amin'ireo vohikala ireo. Raha tsy eo ny tatitra ataon'ireo fampielezam-baovao fototra, tsy manana fomba hafa hampielezana ny tolona ataony hanoherana ireo fandikàna zon'olombelona ny vahoaka Baloch. Raha mbola mikodiadia eny amoron-dàlana ireo faty voakapakapa, ny fianakavian'izy ireo kosa dia mbola tampenam-bava. Ankoatr'izay dia efa fahazarana sady tsy misy antony mitombina ireo sivana. Ohatra, ny vohikala iray mivarotra kiraro vita tànana dia voasakana sady tsy nisy dingana araka ny lalàna natao akory, ireo varotra madinika no mijaly indrindra amin'izany.
Nefa inona no fifandraisan'izany aminareo? Araka ny fantatra, nampianatra anay ireo bokin-tantara fa namanay i Shina, rahavavinay, ary raisina ho modely idealy arahana amin'ny fandrosoana sy fivoarana ara-teknolojia. Na dia mbola variana amin'ny modelin'i Sina ara-toekarena tsy mitsaha-mivoatra aza ireo mpitondra, efa nandinika hatry ny ela ny rafi-panivanana sy fanaraha-mason'i Shina ihany koa izy ireo. Raha maniry ny hiresaka amin'ireo mpitondra ireo mpiaro zo, akademika, mpanao lalàna ary mpandraharaha momba ny akon'ny fanaraha-maso ankapobeny sy ny sivana, ireo mpitondra kosa dia manoro ny ohatr'i Shina, milaza fa ohatra tsara izany. Fantatray fa tsy tena marina izany, satria hitanay ireo Shinoa mpampiasa aterineto mitady ny hihodina ireo sivana aterineto sy mitolona manohitra ny fanaraha-maso ankapobeny – toerana feno miohatra amin'izay toerana efa voasivana omen'ny fanjakàna. Ny tokony hifanolorantsika tànana dia ny toetra tsy misy dikan'ny sivana miha-mitombo: manomboka any amin'ny fanafoanana ny teny hoe “kiraro” any Pakistana, hatramin'ny fanivanana ireo teny … “jasmina” “fozan-dranomamy” “kongresy faha-18” sns. any Shina
Nandritra ny taom-polo maro, nihena ny tontolo sosialintsika, foana ireo toerana ara-kolotsaina sy zavakanto ary mifanandrina amin'ireo fepetra hentitra ny zon'olombelona ankehitriny, saronana anatin'ny ady amin'ny fampihorohoroana. Amin'izao na ny toerana sisa azontsika tsy hanononana anarana na hiadian-kevitra momba ireo lohahevitra saro-pady koa aza dia mihena.
Ny firaisanao hina aminay dia hanampy amin'ny famonjena ny feontsika.
Bolo Bhi “Mitenena mafy”
Mpampiasa aterineto avy any Pakistana
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/04/42360/